Zonke amakhamera isibuko kusistimu encane, sisebenze yokukhanya. Yena, kuyinto replaceable. Ngakho-ke, zonke photographer Kumelwe aqonde indlela ukukhetha lens osifanele lesi sikhundla. Ngaphezu kwalokho, akuwona wonke kukhona jikelele futhi uvumelane ngokuphelele amakhamera. Njengomthetho, kuzomele banake uhlobo entabeni (insabule). Ngokwesibonelo, ama-lens edumile "uhlu lwezincwadi zeBhayibheli" is ezingafanelanga ihadiwe "Nikon". Kodwa emakethe, ungakwazi ukuthola kalula abakhiqizi abazikhiqizayo uhlobo olufanayo e amathuluzi ezahlukene ashaya. Isibonelo inkampani enjalo kufanele ngokuthi Pentax. Kulesi sihloko sibheka lens yimpumelelo kakhulu futhi afingqe eyenziwa abaqeqeshiwe Pentax lens ukubuyekezwa.
Okokuqala uzobe kuchazwe lens ukuthi has a lens ekhethekile. Imodeli ifakwe eliphezulu uhlelo optical, ukuthola ibanga variable ukuba i-focus. I lens libanzi, kanye nensika yalo senziwa metal. Uma wayefisa, ungakwazi ulungise ukukhanya njalo wedwa.
I lens zoom ine engela umbono ka-180 °, okuyinto isici esiyingqayizivele. Ngenxa yokuthi i-ukudepha kwenkundla kuyinto ngempela beziphakamisa for the photographer kukhona amathuba amasha ukuthola.
Lens SMC Pentax DA 10-17mm Uthole ugobile ekhethekile isithombe ohlobene ke nohlobo inhlanzi-iso. Lokhu kwenza kube nokwenzeka ukudala izithombe imiphumela engavamile. Sebenzisa lobu buchwepheshe zizoshintsha ngale ukuqashelwa aura evamile lezinto.
I-lens camera nge enamathela ekhethekile, okuyinto Yenziwe-fluoride. Ukuze wenze lokhu, lisebenzisa inqubo sebethule esiyingqayizivele. Nale ndlela, i-lens ivikelwe ngokugcwele kusukela umswakama nokungcola. Kubaluleke kakhulu futhi kulula ukuhlanza.
lens ngokwayo incane ngobukhulu kanye nesisindo. Yokukhanya futhi idalwe kusetshenziswa ubuchwepheshe evumela ukuthi ukusebenza izithombe digital.
I lens asezingeni elifanele. It kuzokuvumela photographer ukwenza izithombe ezicacile futhi eningiliziwe ngisho izinto ezikude kakhulu. Lokhu ibangelwa iqiniso lokuthi isicelo umdwebo optical esiyingqayizivele esetshenziselwa izibonakude. Ukwakha izithombe ezinhle akudingeki ukwengeza eziningi izakhi ukukhanya. Lokhu kungenxa yokuthi i-optic unekhono konke umuntu. Ngenxa yokuthi izici ezimbili ongaphakeme ukuhlakazwa lens esetshenziswa kalula avumele ukuthola isithombe nge nokucija ezinhle, umehluko kanye aberrations encane.
Umklamo ivikelwe ngokugcwele ngokumelene uthuli futhi umswakama, kanye nezinye eziningi Pentax lens. Akukhona manje kuncike izimo zezulu, ingasetshenziswa e imvula, futhi emakhazeni ashubisa umnkantsha futhi. I-lens has a isihlungi umnikazi ekhethekile, okuyinto wathola ifomu esikhiphekayo. Ngenxa yalesi ukwakhiwa ovunyelwe uphendukisa kuze uze ufike ezingeni oyifunayo tint.
Umbala omhlophe phezu lens isetshenziselwa ulungise Ukushisa enamathela elikuvumela ukusebenza ngamazinga ashisa kakhulu.
Lokhu lens zoom kuyinto ultra-wide. Ubude bayo ebalulekile ifinyelela 3.3-5.5 cm, okungase kubhekwe okusezingeni eliphezulu. Ngenxa ebanzi engela lens uvunyelwe ukuba lisetshenziswe njengeHholo ithuluzi kugxila usayizi yesithombe okuholela ukujula. Lokhu kuyoba usizo uma bethwebula namathafa. ubuchwepheshe Special lens kuzovumela zibukeke khulisa zonke izingxenye eza futhi ukunciphisa lezo zikude. Yokukhanya has usayizi encane, kanye nezinye Pentax lens, futhi wathola ngosizo izithombe akudingeki impambuko ye-chromatic. Ngenxa ovuthayo kanye ingxube ukubukeka obala (uma kwenzeka ukuthi umthombo oyinhloko ukukhanya elise ohlangothini) cishe akunakwenzeka. Amalungu laphawula ukuthi njengoba a plus elikhulu.
Ukuze lens kanye uchungechunge lapho yadalwa, kuyisici sobuntu isikhala enamathela, ilingana emkhakheni SLR amakhamera by 3.5 cm. Lokhu kuvumela ukusetshenziswa yokukhanya, hhayi kuphela amadivayisi digital, kodwa futhi ngoba ezinye izinhlobo amakhamera. Loku kuyehluka le ithuthukiswe Pentax lens. 50 mm - ubude focus.
Uxhumano okusheshayo uhlelo usuke, okuyinto kungabuye ngokuthi i-focus. Ingasetshenziselwa photographer kuphela Ukujikeleza elincane iringi abafanele ukuya okuzenzakalelayo (noma ngesandla) ukudubula Imodi. Ukuze kube lula inqubo, lock focus lakhiwa.
Siyabonga entabeni jikelele, okuyinto ikuvumela ukusebenza khamera futhi SLR, lokhu lens is kabanzi phakathi ochwepheshe kanye Wabasaqalayo. Uphenyo ke ezimweni eziningi ezinhle.
Siyaqhubeka ukhulume Pentax lens. FA 645 kubonakala ephelele kulabo abasebenza ukuthatha izithombe endaweni omagazini lwemibhalo-isitayela. Sikhuluma izithombe Macro. I-lens has autofocus. Isithombe kucacile futhi iphile. Lo mphumela kufinyelelwa ngenxa yokuthi ukuthi yokukhanya has ezingeni lelisetulu isixazululo kanye wayephazamisekile ongaphakeme. Le nhlanganisela iyona impumelelo. I lens abe enamathela ezinhle, kwagcwala isixazululo ekhethekile, okuyinto ugwema uhlobo kancane. Zinikeza induduzo uma ngokudubula. Ngaphezu kwalokho, izithombe okuholela kungukuthi ukukhanya, futhi umbala imifanekiso ezingeni eliphezulu kakhulu.
Le kit unikeza hood lens, esivikela lens kusukela kukhanya. Into efanayo futhi eziningi nezinye Pentax lens. Yokukhanya futhi ifakwe mode ekhethekile evumela ukuthi ushintshele ngokushesha esuka manual okuzenzakalelayo focus ukulungiswa. Lokhu kuvumela uhlelo photographer cha thikazisa Ukufuna izilungiselelo ezidingekayo, futhi uma ngokuhamba umsebenzi ukwenza lokhu zokukhwabanisa. Ngaphezu kwalokho, ukubuyekezwa bathi lesi sici ewusizo, uma umuntu othatha izithombe into esebenzayo.
I-lens kwaba zoom 15-nesibaya. Ukugxilisa yokukhanya lokhu kwenzeka kahle futhi buthule. Futhi ahlukane icwecwe futhi ukukhanya. ochwepheshe lens ngokuthi okudingeka bashintshashintshe ngayo futhi njengoba elula ngangokunokwenzeka. Lokhu kungenxa yokuthi isetshenziswa emikhakheni ehlukahlukene izinhlobo eziningi sokudubula, ngaphandle kokushintsha yokukhanya ngakolunye.
Ngenxa yokuthi diaphragm is babanjwa, izithombe zithambile, abukhali, ecacile. Ingemuva nge imithombo enhle kude futhi kancane esilufifi, futhi eduze iphuzu ukukhanya, inani lemali elincane vagueness. Ukwahlulela ukubuyekezwa, akuzona zonke lens Pentax inganikeza ikhwalithi yesithombe.
Epholile futhi abushelelezi-otho focus olunikezwa injini ekhethekile ukuthi wamiswa ngumkhiqizi. Amalungu bathi uhlelo onokwethenjelwa futhi isebenza ngaphandle izikhalazo.
Lens nakuba kubhekwa esigcwele, kodwa libonisa izithombe ngenxa yalokho. Ingasetshenziselwa ngokudubula ezindaweni ezihlukahlukene nama-engeli. He is impela efanelekayo ngokudala izithombe ekuphileni kwansuku zonke. Uma sikhuluma izithombe professional, lokhu lens isetshenziselwa namathafa, uhlobo, namanje ukuphila nokunye. Ngokuvamile, yokukhanya esetshenziswa nge ikhamera yedijithali, nakuba kungenzeka ukuzama futhi esibukweni. Nokho, okokuqala Union inika izithombe ezicacile futhi emuhle.
Lesi sihloko sichaza lens best of Pentax. Avame esetshenziswa ochwepheshe, ube ukubuyekezwa omuhle kakhulu. Yingakho, uma une ukukhetha onjani yokukhanya namanje ukuthenga, kungcono ukuba banake amamodeli ngenhla. Bayoba isikhathi eside futhi uyojabula izinga izithombe. Mhlawumbe phakathi lezi abathengi uzothola ngokwabo lens engcono Pentax.
Kuthiwani uma ifoni iwela emanzini?
Ukusebenza kanye nokuphumula: njengoba kufanele kube njalo?